Mpampianatra FRAM -Amboasary atsimo 7 volana tsy nandray karama, mandrahona tsy hampanao CEPE
Mandrahona tsy hampanao ny fanadinam-panjakana CEPE hotanterahina ny 27 aogositra ho avy izao ireo mpampianatra FRAM any amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo.
Noho ny tsy naharaisin’izy ireo ny tambin-karamany tao anatin’ny fito volana no voalaza fa anton’izany nefa mampiana-janaka sy mamelona ankohonana avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Manaitra ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ity tranga iainany ity izy ireo. Tsiahivina fa miisa 547.997 ireo kilonga madinika hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny Nosy amin’ity taona 2019 ity ka ny 82 isa amin’ireo dia manana fahasembanana. Tafiditra ao anatin’izany ireo manana fahasembanana ara-pahitana, ny ara-pihainoana ary ny ara-batana. Enin-taona kosa no zandriny indrindra amin’izy ireo.